တကယ်ပျော်ချင်ရင် ချစ်သူဆီက ဒါတွေသိအောင်လုပ်ထား
စိတ်သဘောထားချင်း ဝါသနာချင်းမတူရင် နားလည်လက်ခံပေးဖို့ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
အချစ်ကြောင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးရမှာကို ဘယ်သူကမှမလိုချင်ကြဘူး။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို ချစ်သူနဲ့ပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းချင်ကြတာလေ။ Single ဘဝနဲ့ နေခဲ့တုန်းက အကောင်းသား။ ရည်းစားထားမိတော့မှ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အကျဉ်းချခံရသလို မလွတ်လပ်တော့ဘူး၊ မပျော်ရွှင်တော့ဘူးလို့ ခံစားမိတာကမှ ပိုဆိုးပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့အချိန်အကြာကြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်တွဲချင်ရင် သူ့ဆီက ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ကချည်းသူ့ကိုချစ်နေရတာမဟုတ်သလို သူကလည်း ကိုယ့်ကိုပေးဆပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ခံစားချက်တွေရှိနေကြတဲ့ Relationship ဖြစ်ပါတယ်။ သူကရော အဲ့ဒီအတိုင်း လက်ခံရဲ့လား။ အဲ့ဒီလိုမခံစားရဘူးဆိုရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူးနော်။
ဘဝရဲ့လက်ကျန်နေ့ရက်တွေကို နှစ်ယောက်အတူ ဖြတ်သန်းတော့မယ်ဆို ကလေးယူတာလည်း ပါလာပြီ။ ကလေးယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ အသေးစိတ် သိထားရပါမယ်။ ကိုယ်က ကလေးချစ်ပေမဲ့ သူက ကလေးမယူချင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ကလေးချစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ကိုယ်က ကလေးကိုရိုက်နှက်ရတာမကြိုက်ဘူး၊ သူက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုံးမတတ်သူဆိုရင်တော့ အတော်ညှိရပါဦးမယ်။
ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ပြတ်သွားခဲ့ရတာလဲဆိုတာ သိထားမှ နောက်ထပ်အမှားတွေ မကျူးလွန်မိမှာလေ။ ကိုယ်လည်း အရင်လူနဲ့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြီး ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ သူ့ကိုအသိပေးထားရမှာပေါ့။
၄။ အားလပ်ရက်ကိုသုံးစွဲပုံတွေက တူညီရဲ့လား
အလုပ်နဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေမရှိတဲ့ အားလပ်ချိန်လေးတွေမှာ သူက ဘာလုပ်ရတာ ဝါသနာပါလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အားလပ်ချိန်တွေကို အတူဖြတ်သန်းဖို့က စိတ်သဘောထားချင်း ဝါသနာချင်းမတူရင် နားလည်လက်ခံပေးဖို့ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
လိင်ကိစ္စကို အခြေခံထားတဲ့ အချစ်ရေးက ဘယ်လိုမှ မတည်မြဲပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မပါလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ အဲ့ဒီအပေါ် သူ့ဘက်ကရော ဘယ်လိုမြင်လဲ? ကိုယ်က သူနဲ့ နာရီအတော်ကြာ အထိအတွေ့လိုချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်ကစိတ်ပါရဲ့လားဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ မေးကြည့်ပါ။
၆။ ရန်ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုရှင်းလဲ
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိတ်ဆွေ၊ သူစိမ်း ဘယ်သူနဲ့ပဲ ရန်ဖြစ်စကားများပါစေ သူဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပါ။ တချို့က ရန်သူကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း တိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ တချို့ကတော့ အနိုင်ရဖို့အတွက် ကောက်ကျစ်တဲ့နည်းလမ်းကို သုံးကြတယ်။ ဒါကိုသိထားတဲ့အခါ သူနဲ့ကိုယ် ကတောက်ကဆဖြစ်တဲ့အခါ ဆင်ခြင်လို့ရတာပေါ့။
၇။ ကိုယ်မကြိုက်တာ၊ သူမကြိုက်တာ
ကိုယ့်ဆီမှာ သူမကြိုက်ဆုံးအရာက ဘာလဲ? သူ့ဆီမှာရော ကိုယ်မကြိုက်ဆုံးအရာတွေက ဘာတွေလဲ? ဒါတွေက ပြင်ဆင်လို့မရဘူးလား၊ ပြင်ဆင်ဖို့ မကြိုးစားချင်တာလား၊ ပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးထင်လို့ မပြင်တာလားဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးရပါဦးမယ်။